Caalin soo jeediyay dardar gelinta howlaha ka hortagga argagixisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caalin soo jeediyay dardar gelinta howlaha ka hortagga argagixisada
La daabacay torsdag 12 februari 2015 kl 14.26
Iswiidhen kama jiraan howlo isku habeey-san ee degmooyinka dalka kuwaasina oo looga hor-tegeyo sidii loo joojin lahaa dhallin-yarada jihaadka u socdaasha.Marka loo barbar-dhigo waddammada deriska dalkani la ah, sida uu qabo caalinka arrimmaha argagixisada Magnus Ranstorp:
- Waxaan booqasho ku tagey waddammada Danmark iyo Noorway, halkaasina oo aan tusaale ahaan ku soo arkay howlaha ka socda Kopengeegan, Århus iyo Ooslo. Magaalooyinkaasi ayaa hab wanaag-san loogu howl-galaa iyo hab goolka laga leeyahey uu cayiman yahay. Waxaa la ogsoon yahey tirada dhallin-yarada magaalooyinkaasi ka carrowdey iyo wixii ammuurtaa laga qabtey. Waa howlo aan ka dhicin magaalooyinka dalkan Iswiidhen.
Hoowlaha dalkan ka socda ee ka hor-tagga dhallaanka u socdaala jihaadka ayaan u socon sidii looga baahnaa, marka loo barbar-dhigo waddammada jaarka, sida uu sheegay Magnus Ranstorp. Iyadoona ay howshaasi ku ekaato oo keliya dood laga doodo waa sida uu hadalka u dhigaye.
Xitaa haddii howlaha ammuurtaan loogu jiro oo ey gacanta ku hayso Mona Sahlin, ayuu Magnus Ranstorp soo jeedinayaa in ciidanka ammaanka iyo hayadaha kale ee dawladdu ey wada-shaqeeyn ka wanaag-san ka yeeshaan iyo sidoo kale in la hir-geliyo telefoon lagu soo war-geliyo, mar haddii la dareemo in cidi ku taagan tahay dhabbadaa:
- Waa in howlaha lagu sameeyo isku duwid, middaasina oo aan ula jeedo in la dardar-geliyo xiriirka howlahaa ee ka dhexeeya hayadda bulshada - socialtjänst iyo ciidanka ammaanka. Sidoo kale in si dhakhsiya looga fal-celiyo dhacdooyinka noocaasi ah. Waa in sidoo kale la abuuro liinje telefoon, hase yeeshee howluhu ka bilowdaan xaafadaha.
Hoowlaha la xiriira ka hor-tagga dhallin-yarada u socdaasha jihaadka ayaa inta badan ku saleey-san howlo ey qabtaan shakhsiyaad ku dhaqan xaafadaha qaarkood ee u gubaneya sidii ey wax uga qaban lahaayeen, sida uu sheegay Magnus Ranstorp. Halka xaaladda maanta lagu jiro ey shakhsiyaadkaasi tiradoodu aad u hooseeyso, sida uu sheegay:
- Tiro aan sidaa u badneyn ayaa jira ee howlahan u maja-xeeytey iyo sidii looga hor-tegi lahaa dhallin-yarada u socdaasha sidii ey jihaadka uga qayb qaadan lahaayeen, qaasatan xaafadaha ku yaala magaalooyinka waaweyn. Waxaa jira ururro madax-bannaan oo gacan ka geeysta. Ururka daladda ururrada soomaalida ayaa la oran karaa inuu ka mid yahay ururrada u xaytay sidii ey wax uga qaban lahaayeen gaar ahaan dhallin-yarada asalkoodu soomaalida yahey ee u socdaasha goobaha ey ka socdaan dagaallada xag-jir-nimo. Halka ey dhanka kale jiraan tiro aan badneyn ee ururrada gacanta ka geeysta howlaha looga hor-tageyo amuurtaa.
In howlaha looga hor-tegeyo xag-jir-nimada ee dalka Iswiidhen aaney u socon sidii loogu talo galey ama istaageen ayuu ku macneeyay Magnus Ranstorp doodihii ka dambeeyey dhacdadii dhacdadii 11 sebteembar ee daaraha lagu rogey dalka Mareeykanka:
- Kolka laga hadleyo ka hor-tagga ama la dagaalanka argagixisada ayay doodda ka aloo-san dalkani tahay mid aan sidaa u ballaarneyn wixii ka dambeeyay dhacdadii 11-kii sebteembar ka dhacday mareekanka. Sidoo kale culeeys ballaaran ayaa middaa ka soo wajahay xoogag bulshada dhumuc ku leh. Waxaa muuqata inaan la daneeneyn dood middaa la xiriirta iyo waxa dhacaya. Maxay salka ku hayaan caqabadaha argagixis-nimadu. In indhaha laga laabto halista noocyada kala duwan ee argagixisada. Waxaa dhegaha laga fureeystey iney dalka ka jiraan kooxo aamin-san jihaadka iyo argagixis-nimada iyo sidii loo qaabili lahaa ama looga doodi lahaa, sida uu sheegay Magnus Ranstorp.